Tsy maintsy atao ny fanazaran-tena ara-panahy
“Miambena hianareo, tomoera tsara amin’ny finoana, aoka hitombandahy , mahereza” 1 Kôr. 16:13
Ohatra iray misandratra no aseho eo anatrehan’ny tanora, ary manasa azy Andriamanitra mba tena hiasa ho Azy. Ny tanora mahitsy am-po izay tia mianatra ao amin’ny sekolin’i Kristy, dia afaka manao asa lehibe ho an’ny Tompo, raha toa izy ka tsy mihaino afa-tsy ny baikon’Ilay Kapiteny araka ny teniny voasoratra ho antsika amin’izao fotoana izao: “Aoka hitombandahy , mahereza”.
Avy amin’ny fanazaran-tena ny tanjaka. Izay rehetra mahafoy hampiasa ny fahaiza-manao izay nomen’Andriamanitra azy, dia hitombo fahaiza-manao hatokana hanaovana ny asany. Izay tsy manao na innona na inona aho an’Andriamanitra , dia tsy mba hitombo amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana ny fahamarinana . Ny lehilahy mitsotsotra ka mandà tsy hampiasa ny ratsam-batany , dia hamoy tsy ho ela ny hery hampiasa azy ireny. Noho izany, ny kristianina izay tsy mampiasa ny hery nomen’Andriamanitra azy, dia sady tsy hitombo ao amin’i Kristy, no hamoy koa ny tanjaka efa ananany. Lasa mararin’ny paralisisa ara-panahy isika. Izay miezaka fatratra hanampy ny hafa, noho ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny mpiara-belona aminy, no hahatombina sy hahazo tanjaka ary ho tafatoetra amin’ny fahamarinana . Miasa ho an’Andriamanitra ny tena kristianina marina, tsy amin’ny fo mirehidrehitra fa amin’ny fitsipi-piainana ; tsy iray andro na iray volana, fa mandritra ny androm-piainana manontolo.
Enga anie isika tsirairay avy hanao tombana mendrika ny fahaizana nomen’Andriamanitra antsika. Amin’ny alalan’i Kristy no ahafahanao mianika ny tohatry ny fandrosoana, ka mitondra ny hery rehetra ho eo ambany fibaikoan’i Jesosy (...). Tsy mahay manao na inona na inona amin’ny herin’ny tenanao ianao; fa eo ambany fahasoavan’i Kristy no hahafahanao mampiasa ny hery mba hikatsaka izay mahasoa indrindra ho an’ny fanahinao, sy fitahiana lehibe indrindra ho an’ny fanahin’ny hafa. Mifikira amin’i Jesosy, dia hazoto hanao ny asan’i Kristy ianao, ary handray ny valisoa maharitra mandrakizay, amin’ny farany.